HomeEnglandTababarihii Ugu Horeeyey ee Ajanabi Ah ‘Van Gaal’ Oo Si Rasmi Ah Loogu Magacaabay Tababaraha Cusub Ee United
Manchester United ayaa tababareheeda cusub si rasmi ah ugu magacawday Louis van Gaal kadib erigii tababarihii hore ee kooxda shayaadiinta dharka cas ee David Moyes oo bishii hore laga caydhiyey garoonka Old Trafford.
Tababare Van Gaal ayaa isla markii lagu dhawaaqayba bushaaro u diray taageeryaasha kooxda Unite, una sheegay in gacmaha oo ay is qabsadaan kali ahi ka xigto inay taariikh cusub kooxda u horseedaan.
‘Naadigani ujeedooyin waaweyn buu leeyahay. Aniguna sidoo kale ujeedooyin waaweyn baan leeyahay. Wadajir oo aan u midayno ka midhadhalinteeda, waxaan hubaa inaan taariikh dhigi doono.’ Ayuu yidhi Luis Van Gaal, tababaraha cusub ee naadiga Manchester United.
Khabiirka reer Holland ayaa qalinka ku duugay heshiis saddex sanno ah oo uu joogi doono Old Trafford, waxaana nasiib wanaag ku xigeen looga dhigay Ryan Giggs, tababarihii kumeel gaadhka ahaa ee kooxda United, isla markaana ku dhawaaqay inuu kubada cagta ciyaaristeeda ka fadhiistay laakiin uu aqbalay inuu caawiye u noqdo tababare Van Gaal.
Frans Hoek iyo Marcel Bout ayaa iyagana loo caleemo saaray labada caawiye ee kale ee Tababare Luiz Van Gaal.
Luis Van Gaal oo wakhti xaadirkan hor kacaya xulka qaranka wadanka Holland ee ka qayb gallaya koobka aduunka sanadkan lagu qabanayo wadanka Brazil ayaa noqon doona tababarihii ugu horeeyey taariikhda kooxda Manchester United ee Ajanabi ah ama aan u dhallan wadan weynaha Britain.
Ciyaartooyo Ka Xanaajiyey Jose Mourinho
29/10/2014 Abdiwahab Ahmed
Budhcad Jabsatay Guriga Di María Iyo Wixii Ka qabsaday